"Te hihavana amintsika Andriamanitra..." - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Alahady 21 Marsa 2021
Alahady Fahadimy Karemy 5B
Jer.31, 31-34 ; Heb.5, 7-10 ; Jn. 12, 20-33
Tempoly ho ravàna, bibilava hasandratra. Izany kisary izany no entin’i Jesoa manambara ny misterin’ny fijaliany sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany ho velona, araka izay efa henontsika tamin’ny evanjely nandritra ny Alahady roa nifanesy izay. Amin’ity Alahady fahadimy amin’ny Karemy ity dia ny fanoharana momba ny voam-bary nafafy indray no mbola entin’i Jesoa manambara ny misterin’ny fijaliany sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany ho velona. Izany rehetra izany anefa dia fintinina amin’ny foto-kevitra androany hoe : nahafoy ny zanany lahitokana ho antsika olombelona Andriamanitra Ray satria te hihavana amintsika Izy.
« Tompoko, mba ta hahita an’i Jesoa izahay ». Ny fanirian’ireo Jentily (Grika) mba te hahita Azy no toy ny paik’ora nandrasan’i Jesoa hidirany amin’ny misterin’ny Paka. Raha vao nandre ny fangatahan’ireto Jentily, izay nampitaina tamin’ny alalan’ireo Apostoly Filipo sy André, i Jesoa dia nanandra-peo hoe : « Tonga ny fotoana hanomezam-boninahitra ny Zanak’olona ». Ilay « ora » idirany amin’ny fijaliany sy ny fahafatesany no lazainy kanefa lazainy ihany koa fa fotoana hanomezam-boninahitra Azy. Fanampin’izany dia ambarany ihany koa fa rehefa tafasandrata hiala amin’ny tany Izy dia hitarika ny olona rehetra – na Jody na Jentily – hanatona Azy. Efa fanandratana an’i Jesoa sahady izao fanirian’ny Jentily hahita Azy izao. Fanomezam-boninahitra Azy ny fitadiavan’ny Jentily hahita Azy hatramin’io fotoana io ka mandrak’izao androntsika izao. Eny, ny olombelona no te hahita an’Andriamanitra fa raha ny tena marina Andriamanitra no te hahita ny olombelona, indrindra hatramin’ny fotoana nanotàn’i Adama sy Eva ka niafenan’izy ireo tsy ho hitan’Andriamanitra satria menatra izy ireo fa nitanjaka… Havan-tiana tsy maha lavi-tany ho an’Andriamanitra anefa ny olombelona…
« Ankehitriny, mitebiteby ny fanahiko… Raiko ô, vonjeo aho ho afaka amin’ity ora ity ». Manomboka àry izao ny fidiran’i Jesoa amin’ilay « ora masina ». Mitebiteby ny fanahiny. Hambarany amin’ireo Apostoly izany tebitebiny izany : « Ory ny fanahiko ka hila hahafaty ahy », hoy Izy rehefa tonga tao Getsemanì (Mt. 26,38a ; Mk.14, 34a). Mbola tantarain’ny taratasy ho an’ny kristianina Hebrio ihany koa izany tebitebin’i Jesoa izany : « I Kristy tamin’ny andron’ny nofony, nony nanolotra fivavahana sy fifonana nombam-pitarainana mafy sy ranomaso be tamin’ilay nahavonjy Azy…, dia nianatra ny fanekena tamin’ny fahoriana niaretany » (Heb. 5, 7-8 ; vakiteny faharoa). Nohenoina anefa ny fitarainany ; fanomezam-boninahitra ny anaran’ny Ray izany ora izany sady fanomezan’ny Ray voninahitra ny Zanaka ihany koa : « Efa nomeko voninahitra Izy, ary mbola homeko voninahitra indray ». Alahelo tsy ambara havana, hono, zakan’ny tompony ihany… Havana mahatoky an’i Jesoa ireo mpianany ka izarany ny tebitebiny. Havana mahatoky ho antsika ihany koa ny Tompo ka izarana ny manahirana.
« Raha tsy maty ny voam-bary nafafy tamin’ny tany dia mitoetra foana izy ; fa raha maty kosa izy, dia mahavokatra be ». Afafy amin’ny tany ny masomboly, ny voam-bary ; alevina anaty fotaka sy zezika, ary afaka andro vitsivitsy dia indro fa nitsimoka indray ary tsikelikely dia ho vary vokatra ho sakafo mahavelona. Ilay Zanaka lahitokan’ny Ray no voam-bary nafafy tamin’ny tany. Ny Ray no mpamafy ; izao tontolo izao, ny olombelona rehetra, no taninketsa famafazana ; ny fahotana sy haratsian’izao tontolo izao no fotaka sy zezika ilevenan’Ilay voam-bary nafafy, ka ny fahafatesany sy ny fitsanganany ho velona indray no mitondra famonjena sy fahavelomana ho an’ireo izay mino sy mandray Azy. Ny fahafatesany sy ny fitsanganany ho velona no fehim-pihavanana ifamatoran’ny olombelona sy Andriamanitra indray. Raha maty aho matesa rahavana, hoy ny ohabolana malagasy, fa raha tsy maty ny voam-bary nafafy dia mitoetra foana, hoy kosa i Jesoa… Maty ny voambary nafafy, maty rahavana…fa namokatra be. Tonga ketsa telo andro tao am-pasana Izy fa hamokatra vary maro anaka, dia ireo rehetra miroso amin’ny batemy amin’izao fiomanana amin’ny Paka izao.
« Raha misy manompo Ahy, dia aoka izy hanaraka ahy, ary izay itoerako no hitoeran’ny mpanompoko koa ». Enga anie izahay, ry Tompo, mba hanaiky ho voam-bary alevina amin’ny tany ka hitsimoka hiaraka Aminao, hitondra famonjena sy fampihavanana ho an’izao tontolo izao noho ny herin’ny Hazofijalianao.